Fitepon’ny Tontolon’ny Bilaogy Saodiàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2018 2:56 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2006)
Lohahevitra maro samihafa sy mahaliana no voaresaka tanatin'ny tontolon'ny bilaogy Saodiàna tamin'ity herinandro ity, ka ndeha ary hatomboka avy hatrany ny famintinantsika.
Inona no tsy itovizan'ny demokrasia sy ny demokrasia Amerikanina? Mihevitra i Hassan fa manana ny valiny izy (Arabo). “Ao anaty demokrasia, ireo mahazo vato betsaka ihany no afaka mandresy. Ao amin'ny demokrasia Amerikanina, tsy tokony hanao ratsy an'i Etazonia izay mandresy, ary raha mandresy izy ireo, hilàna vaniny amin'ny fomba rehetra. Ny toerana raisin'ny Amerikanina manoloana ny Governemantan'ny Hamas ao Palestina sy ny Governemanta Irakianina no porofon'izay”
Vao haingana i Farooha no nitsidika tao amin'ny nosy akaikin'ny fanjakan'ny Bahraina, ary tsy dia faly tamin'ny fitondrantenan'ny lehilahy mponina tao. Manontany tena izy: “Fa mba taiza izahay tamin'ny andro nanomezan'Andriamanitra ny fahaizamiaina sy fahalalampomba?” ary niteny fa “resin-tory angamba isika tamin'izany maraina izany“
Manoratra momba ny familian'ny vehivavy fiara i Aya, miantso izany ho ny Olana mampizarazara indrindra ao Arabia Saodita. Nanampy izy:
Raha sendra mahazo ny zony ny vehivavy, hisy “Arabia Saodita talohan'ny namilin'ny vehivavy fiara” ary “Arabia Saodita taorinan'ny namilin'ny vehivavy fiara”. Tsy hitovy intsony ny zavatra manomboka eo. Ary noho izay antony izay ihany no hampisy fanoherana betsaka kokoa an'io olana io, tsy momba ny fiara sy ireo vehivavy manirery fotsiny izany, tsia, momba ny fanokafana ny boatin'ny Pandore (ilay vatakelin'ny tsy ampozina).
Nanana fanehoankevitra fohy momba ilay fehezantenin'ny fitsarana Aotrisianina hanagadra ilay Anglisy mpahay tantara, David Erving, ny Green Tea. Nanoratra izy :
Miala tsiny aho, mikorontan-tsaina aho angamba! Saingy tsy mandeha ao ambanin'ny atao hoe ‘fahalalana miteny’ ity tantara ity izay tsy mitsahatra tenenin'izy ireo ny momba azy. Sa hoe azo ampiharina amin'ny mpaminanintsika (fiadananana anie ho aminy) sy ny finoantsika, fa tsy ny ataon'izy ireo hoe Famonoana Faobe!
amin'ny herinandro farany teo, naka toerana tao amin'ny tànana mahafinaritra amoron'ny Ranomasina Mena ny Vovonana ara Toekarena Jeddah (JEF), ary mihevitra i @rabian Rash fa “ampy tsara anamboarana ny lavaka ary ny olan'ny rano maloto ao Jeddah” ny vola naloa ho an'ny mpiteny tao amin'ilay toerampiresahana ho an'ny minitra nikabarian-dry zareo. Fa tsy mitaraina izy, satria “ho an'ny tombontsoantsika daholo izany”, hoy izy.
Resahan’ i Fouad Al-Farhan ny momba ny fanapahankevitry ny Ministeran'ny Fampianarana hampianatra ny Ardah, dihy vakodrazana malaza ao amin'ny faritra ampovoan'ny Najd, any amin'ny sekoly Saodiàna. Hazavainy fa samy manana ny fombany ny faritra rehetra ao amin'ny firenena, ary tsy voatery ho ampahany ao anatiny ao ny Ardah. “Andrana vaovao mba hamadihana ny firenena ho Najd ve izany?”
Mihevitra i Riyadhawi fa vokatrin'ny ady tsy mitsahatra iainan'ny faritra (Arabo) ny ankamaroan'ny olana ara-politika sy toekarena atrehan'ireo firenena Arabo, miaraka amin'ny tahan'ady iray isaky ny folo taona nanomboka ny 1948 katramin'izao. Hoy izy “Ankehitriny, akipiho ny maso ary raiso sary an-tsaina ny toejavatra ara-politika sy toekarena raha toa tsy nisy nitranga ireo”
Ary farany, ndao isika hanao fitetezana fohy momba lahatsoratra malaza: Namoaka sary avy ao amin'ny Fetibe Nasionalin'ny Lova sy Kolontsaina (aka Janadriyadh) i Itachi. Nanoratra momba an'i Dan Brown, ilay mpanoratra tantara malaza i Abod. Avy namaky ny tantaran'i Nostradamus, manontany tena i Talal momba izay lova ho apetrany raha hametraka iray. Nanampy izy “Inona avy ny toejavatra isankarazany izay efa nandalovako ary ireo izay ho lalovako ka mety hanoratra ny zavabitako ho ao anatin'ny tantara na hamela azy hofafàn'ny rivotra”